कल्पना भट्टराई -
डा. शैलेन्द्र सिग्देल -
राजनितिमा भर्खर प्रवेश गरेकी रन्जुलाई मेयर पदमा निर्वाचित गराएर उनीलाई मार्गदर्शन गर्ने भूमिकामा तपाई रहनु भयो भने निश्चय नै नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो एउटा नयाँ प्रयोग हुनेछ। अरुले पनि यसबाट पाठ सिक्ने छन्। नयाँ पुस्तालाई राजनितिमा स्थान दिन यो कोशेढुंगा साबित हुनेछ। मलाई के पनि विश्वास छ भने वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति खोजिरहेका काठमाण्डौबासीहरुले तपाईहरुलाई अवश्य विजय गराउने छन्।
नयाँ वर्ष प्रण
इन्द्र थेगिम - रित्तो बोतल र खाली शिशाहरूले सामुहिक आत्महत्या गरे। ऊ परऽऽको एक कुनामा हेर त? एक थुप्रो लासहरू जस्तै डंगुर लडिराछ। चीत्कार तिरस्कार अपहेलना बितृष्णा निराशापन सँगसँगै चिच्याई रहेका थिए बोतलको साहारा लिएर । गोरा~काला, हँसिला~ अँध्यारा कोम...
मजबुत स्थानीय सरकारका लागि सक्षम जनप्रतिनिधि
रमाकान्त शर्मा -
जनप्रतिनिधिहरुको अवधि समाप्त भएपछि कर्मचारीको शासन सुरु भयो। कर्मचारीको उद्देश्य र प्रवृत्ति भनेकै जागिर खाने र पैसा कमाउने हो। देशकै कर्मचारीको उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति मुख्यसचिव जस्तो पद प्राप्त गरेको व्यक्ति त पद त भै हाल्यो पैसा पनि कमाउनु प¥यो भनेर विदेश हिँड्ने अवस्था छ भने त्यसभन्दा तलका कर्मचारीको हालत के होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको मतलब सबै कर्मचारी पैसाकै लागि काम लाग्दछन् भन्ने होइन।
गगन थापा र विश्वप्रकाशहरुलाई चिठ्ठी !
चन्द्र के.सी. -
क्षमा गर्नुहोला, म कांग्रेसको सदस्य भएका कारण कांग्रेसको गर्विलो इतिहास र शक्तिशाली बर्तमानको विषयमा निश्चय पनि अनभिज्ञ छैन। सँगै देशको समृद्ध भविश्यको राजमार्ग आजको विद्यमान कांग्रेसको काम गर्ने सोच र शैलीले सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा पनि अनभिज्ञ छैन। नेतृत्वका लक्ष्यहरु सधै आफू केन्द्रित मात्र छन्। सत्ता र शक्ति जोगाउन मात्र नेतृत्वको प्राथमिकताको विषय बन्छ। नेतृत्वसँग न इमान–जमान छ, न विधि र प्रकृया छ, न सपना र कल्पनाशिलता, न समस्याहरुको समाधान गर्नसक्ने कार्यकौशलता छ। त्यसैले महोदयहरु, मेरा अघि देश फेर्नका लागि भनेर कांग्रेस फेरिन्छ कि फेरिदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
भारतीय प्रहरीको गोलीले नेपाली मारिँदा साझा बसमा आगो किन?
कृष्णप्रसाद शर्मा -
नेपालमा हुने बन्द हड्तालका कार्यक्रममा धेरैजसो आगजनी र तोडफोडका कार्यक्रम सम्भवत: विप्लवले नै आयोजना गरेका बन्दमा हुने गर्छन्। त्यसमा पनि धेरै नोक्सानी मजदुर वर्गले नै खेप्नुपरेको देखिन्छ। चालकलाई ट्याक्सी भित्रै राखेर बाहिरबाट आगो लगाइएका घट्ना समेत हामीले यस्ता बन्द हड्तालमा देखिसकेका छौँ। ती घटनासम्म त मैले पनि केही लेखिनँ। माओवादी जनयुद्धको समयमा यस्ता आगजनीका घट्ना धेरै देखिएकाले पनि स्वभाविकै ठानियो।
छोराछोरी बिग्रिए तेरा, सप्रिए मेरा
सीता अर्याल -
अझ श्रीमतीले वेड टी बनाएर लगेर बोलाउँदासम्म पनि उनिहरुलाई उठ्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो लाग्छ की चिया पिईदिएर श्रीमतीमाथि उनिहरुले कुनै कृपा गरिरहेका छन्। एउटै समयमा अफिस जाने र घर फर्कने उनीहरु घरको कामको जिम्मा चाहिँ श्रीमतीको टाउकोमा मात्र थोपर्छन्।
उषा रश्मि पाण्डेय - विश्वको जुनसुक्कै वैज्ञानिकलाई आग्रह गर उसले सक्ने छैन कसैलाई जीवन दिन विश्वको जस्तो सुक्कै चित्रकारलाई खोज उसले सक्ने छैन जीवनको रंग भर्न मैले त प्रकृतिबाट पाएको यो जीवन लिला मलाई त अस्तित्वले दिएको यो मानव चोला म जन्मिदाँ त थिए केवल मान...
- सरगम भट्टराई -
ठूला सञ्चारमाध्यमको मनोमानी, सरकारको लाचारीपन
मनीषा अवस्थी -
सञ्चारमाध्यमहरुले कहिले समाचारमा त कहिले बिज्ञापनमा पटक पटक यस्ता गल्ती दाहो¥याइरहन्छन् । जसका कारण लोकतान्त्रिक पद्दतिमा पुगेका नेपालीहरुको सही सुचना पाउने अधिकारमा असहजता पैदा भएको छ। यो सुचनजाकै हकमा पहिलो कुरा सञ्चारमाध्यमले स्रोत बिना प्रकाशन/प्रसारण गर्नु नै गल्ती हो। दोस्रो नेपालमा प्रयोग हुने नाङ्गा साबुनको गुणस्तरबारे बिज्ञापन प्रस्ताव आइसकेपछि ती उत्पादनको गुणस्तरबारे छलफल परामर्श तथा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउनुपथ्र्यो जुन कुरा आम सञ्चारको दायित्वभित्र पथ्र्यो।
विकासको नाम जपी, माछो-माछो भ्यागुता बनाए
डा. रबिन खड्का - हेर हाम्रा नेताले, आफैंलाई भुइ-फुट्टा बनाए। बिखन्डनको बाटो रोजी, न यता न उता बनाए । अनेकौ वाद तन्त्र भनी सधै जनता झुक्याइरहे, विकासको नाम जपी, माछो-माछो भ्यागुता बनाए । देखावटी झगडा गर्ने, वर्षै पिच्छे सत्ता फेर्ने, पालै-पालो लगाइ देश, ...
हामी मधेसीबाट कहिले नेपाली हुने?
सुशीलकुमार साह - lsquo;ल् उठनुस तपाईहरु, आ–आफनो झोलाहरु चेकजाच गराउनुहोस्’, यसरी जोडले आएको एक्कासी आवाजले म झस्केर उठेँ। उठेर देख्दा भर्खर हेटौडा, मकवानपुरको रातोमाटीमा ट्राफिक पोष्ट नजिकसम्म पुगेको थिएँ। केही दिन अगाडि आर्थिक राजधानीको रुपमा चिनिने शहर...
कति फरक किसिमको आन्दोलन
घनश्याम शर्मा -
नेपालमा पनि विभिन्न विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा आन्दोलन हुँदै आएका छन्। कुनै जायज माग होला कुनै जायज माग नहोला आफ्नो ठाँउमा छन्। आफ्नो हक अधिकारको लागि कुनै ठाँउमा भेला भएर शान्तिपूर्ण माग राख्न पाउनु मौलिक अधिकार हो। तर, आन्दोलनको नाममा अरुको हक आधिकारको ख्याल नगरी देशलाई आर्थिक व्यय पर्ने गरि उद्योग धन्दा शैक्षिक संस्था सवारी साधन ठप्प पारी गरिने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन, देशको हितमा हुन सक्दैन।
भक्तप्रसाद गैरे -
केशव प्रसाद पाण्डे -
छठमा दुई दिन विदा चाहिन्छ
राजकुमार पासवान -
छठ मिथिलाञ्चलमा प्रमुख चाडका रुपमा मनाए पनि हाल मेचीदेखि महाकालीसम्म तथा राजधानी उपत्यकाका तीनै जिल्लासहित अधिकांस जिल्लामा मनाउन थालिएको छ । कतिपय ठाउँमा हिन्दु धर्मबाहेकका अन्य धर्माम्बलीहरु समेत यो पर्व मनाउन थालेका छन् ।
नवयुगको प्रचण्ड सामन्तवाद!
किशोरप्रसाद जोशी -
नेपालमा सामन्तवादको अवशेषको रुपमा लिइएको १०४ वर्षिय राणा शासन, ३० वर्षको पञ्चायत र २४० वर्षिय राजतन्त्र शाही शासनको अन्त्य गरी दुनियाँ कै क्रान्तिकारी मानिने जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बनाइयो। सर्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली संघियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व संसदीय व्यवस्था सहितको संविधान निर्माण भयो। भौतिक रुपमा सामन्तवादी राजतन्त्रको दाहसंस्कार गरियो। जनताबाट निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधी शासन सत्ता चलाइरहेका छन्।
घर नजाने पत्रकारको दसैं
उमा केसी -
गाउँमा मेरो पनि सानो घर छ। परिवार छ। आफन्त छरछिमेक छन्। यी सबैको सम्झना मलाई पनि आउँछ। घर मास्तिर लटरम्म जुनार पाक्न थालेका छन्। बारीमा कोदो, फापर, तिल, गहत, मस्याङ झुलिरहेको छ। खेतमा धान लहलह भएको छ। यो सहर दसैंमा सुनसान हुँदा मेरो गाउँ राजधानीबाट गएका आफन्तले भरिएर रङ्गीचङ्गी भएर गुञ्जिएको छ। लिङ्गे पिङले सजिएको छ यतिबेला मेरो गाउँ।
सुमोमा यात्रा गर्न ७ सय को टिकटमा एक हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने!
बज्र बस्नेत -
अहिले नेपाल सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सबैखाले सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न तथा तोकिएको भन्दा बढी भाडा नलिन सम्बन्धितलाई कडा निर्देशन दिएको भन्ने समाचारहरु सुन्न र पढ्न पाइन्छ।
विशेष गरी काठमाडौंको बल्खुस्थित सुमो सेवाका काउण्टरहरूले दसैंको समयमा यताबाट मात्र यात्रु ओसार्नुपर्ने र उताबाट खाली फर्किनुपर्ने भन्दै टिकटमा तोकिएकै मुल्य उल्लेख गर्ने तर यात्रुबाट थप रकम लिने गरेका छन्। मैले काठमाडौंबाट सर्लाहीसम्म जानको लागि रू ७०० दरका टिकट काटेँ। तर मैले ७०० अंकित टिकटमा १ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्‍यो।
श्रेया पौडेल -
जसपाल सिंह - देशभरिका सरकारी अस्पताल जहाँ आम निमुखा नेपाली जनताले सित्तैमा औषधी उपचार पाउनु पर्ने हो तिनै स्वयं रोगी र जीर्ण भएर बसेका छन्। राज्य, नेता, स्थानीय गुण्डा तथा माफियाबाट अनैतिक रूपमा परिचालित तथा राजनितिक खेलको मैदान भएको छ।
- सरगम भट्टराई - म बिषय वस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु: तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो र सपथ ग्रहणमा जानुभयो। ईश्वरका नाममा तपाईंले सपथ खानुभएन। ठिकै छ तपाईं भौतिकवादी नै हुनुहुँदो रहेछ। रह्यो कुरा जनताको नाममा कसम खाने: त्यो त आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुहोला जनताका लागि के के गर्नु भो भनेर! यी कुरा अहिलेको विषयवस्तु होइन। अहिलेको मेरो प्रमुख चासोको विषय भनेको तपाईंको पहिरन हो। दौरा सुरुवाललाई सामन्तीको पोशाक भनेर तपाईंले सपथ ग्रहणमा त लगाउनु नै भएन र भारत भ्रमणमा पनि लगाएको देखिएन।
देश त लोकमानले चलाएका रहेछन्
जगन्नाथ लामिछाने - रोल्पा यात्राले डा. केसीलाई लडाईंमा दरिलो गरी उभिन आत्मबल दिने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘जब म दुर्गम गाउँ पुग्छु, मलाई त्यहाँको गरीबी र स्वास्थ्य समस्याले पीडा दिन्छ। देशको गरीबी प्रति उदासिन बन्दै बर्षौंदेखि सुतेका नेता सम्झेर आक्रोश बढ्छ। अनि,नेपालभरीका गरीब जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पाउनुपर्छ भन्ने संकल्प गरेर म सत्याग्रहमा होमिन्छु।'
प्रधानमन्त्री ज्यूको आसन्न भारत भ्रमण दललाई बेलौरीको खुलापत्र
केशवराज जोशी - बेलौरी आउँदा जनतासँगको भेटघाटमा होस् वा कतिपय आमसभामा सम्बोधन गर्दा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूहरु, राजनैतिक दलका नेताज्यूहरु, सर्वमान्य नेताज्यू समेतले पटक पटक बेलौरीको प्रशंसा गर्दै, विकासका प्रचुर सम्भावनामा प्रकाश पार्दै सदरमुकाम विस्थावित भएको प्रसंग उजागर गर्दै यहाँको विकास र समृद्धिका लागि गरेका कबुलहरु, आश्वासनहरु, झुटा नहोउन भनि यहाँका जनता अत्यन्त चिन्तित छन्।
कृष्ण भुसाल - अवस्था कस्तो छ भने आफ्नो स्वास्थ्य समस्याहरुको पहिचान अनि निराकरण गर्ने क्रममा झुक्याईएको, ठगिएको साथसाथै कहिलेकाही त थर्काइएको पनि चुपचाप सहन जनता बाध्य छौ। किनभने हाम्रो शासनप्रणाली हाम्रा आधारभूत सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकताका साथ लागेको महसुस गर्ने अवसरबाट बञ्चित छौं। स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बजारमा रुपान्तरण गराइएको छ। जसमा सरकारी अस्पतालहरु पनि कटिबद्द देखिएका छन्।
रामकृष्ण अनायास - ‘मौनता’ निकै रोचक घतलाग्दो आख्यान छ समाजमा रहेका बिकृति,विदेशप्रतिको मोह बिदेशमा भोगेको जीवनशैली माया,प्रेम,मिलन, बिछोडको आदि ब्याख्या गरिएको छ ।
भगवान! बरु मलाई पाप लागोस्
सिर्जना पोखरेल - पूजा कोठातिर त जाँदै नजानू देउताले सराप्छन्। पाप लाग्छ त्यसो गर्नु हुन्न।’ त्यस दिन मनमनै सोचिरहें यिनीहरुकी कस्ती आमा बिरामी भएका बेला पनि कसैले गाली गर्छन् भनेर। बाहिर राखेर भुइँमा बसाएर भात दिन्छन्। अनि अझ झन् देउतालाई सम्झिँदा पनि पाप लाग्छ रे। हिजोसम्म त्यही पानी चढाएर पूजा गर्दा खुसी हुने भगवानले आज चैं किन सराप्नुरु पछि बुझें उहाँलाई महिनावारी भएको रहेछ।
केकीको डिग्री र मिसेल ओबामाको भाषण
निशा गेलाल - कोसिस गर्नेहरु कहिल्यै हार्दैन भन्दै केकीले कवि हरिवंश राय बच्चनको कविताका पंक्ति करिब ८ मिनेट लामो ग्य्राजुयसन भाषणमा ४ पटक दोहोर्‍याइन् जस्ले एक किसिमको उर्जा सबैमा ‘ट्रिगर’ गर्छ तर केकीको एमबिए डिग्रीले आम युवतीलाई कुनै प्रेरणा दिँदैन। मिसेल ओबामाले भने जस्तो हिलारी क्लिनटनले सिम्वोलिक लेभलमा अमेरिकामा राष्ट्रपति महिला बन्न सक्छन् भन्ने सम्भावना देखाएकी छन्। क्लिन्टनको नोमिनेसनले अमेरिकामा कुनै ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नल्याए पनि एउटा सन्देश प्रवाह गर्छ कि सबै अवरोध ढल्ल सक्छन् जसले सबैको बाटोअघि रहेका अवरोधलाई क्लियर गर्छ।
को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती?
जयराम पुडासैनी - नेपालमा पछिल्लो समय अलि चर्कै स्वरमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको सूची तयार गर्नेहरुको भीड बढ्न थालेको छ। अहिले राज्यको ढुकुटीबाट सात पुस्तालाई पुग्ने गरी कुम्ल्याएका मानिसहरुमा अलि बढी नै राष्ट्रवादी हुने जोश चढेजस्तो देखिन्छ। ओली जीहरुलाई मैमात्र देशभक्त हुँँ, मै अमरसिंह हुँ, मै बलभद्र हुँ, भन्ने भ्रम छ।
जयराम पुडासैनी - सीमामा भारतको यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति छ। काठमाडौँको राज्यसत्ता बस्नेहरु सँधै यो वा त्यो वाहानामा भारतप्रति लम्पसार छन्। उता जनता बाध्य भएर भारतीय ज्यादतीको सशक्त प्रतिकारमा उत्रिरहेका छन्। तसर्थ नेपाल सरकारले बेलैमा भारत सरकारका तर्फबाट दशगजा तथा सीमाक्षेत्रमा भइरहेका कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल बन्द गरोस्। नेपाली भूभागमाथि गम्भीर असर पर्ने गरी एकतर्फीरुपमा विगतमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरुको तत्काल अनुचित सञ्चालन बन्द गरोस र नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग वार्ताको थालनी गरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मापदण्डअनुरुप तत्काल द्विपक्षीय सम्झौताको पहल गरोस् तथा त्यस्तो सम्झौता सम्पन्न नभएसम्म एकअर्कामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी सीमा जलक्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्ने नगराउने बाध्यकारी घोषणा गरोस्।